Lelee Ọnọdụ ngwugwu Ozi-urdolls Mmekọahụ Doll Shop
Kedụ ka m ga - esi soro ọnọdụ nke ngwugwu nwa bebi m?
Tupu ịkpọtụrụ Urdolls, a na-atụ aro ka ị jiri njikọ nsuso akọwapụtara n'okpuru ebe a iji soro ọnọdụ nkwakọ ngwaahịa dịka usoro mbupu.
17track akwadowo ọtụtụ ndị otu mba na ókèala nke UPU (Universal Postal Union).
Mgbe ị mechara ego. A ga-etinye doll gị na mmepụta ozugbo. Mmepụta nke ụmụ bebi mmekọahụ na-ewe ihe dịka ụbọchị 5-15. Ndị ahịa anyị ga-eziga nọmba nsuso na igbe akwụkwọ ozi gị n'ime ụbọchị 2-3 mgbe enyerela nwa bebi mmekọahụ, ka ị nwee ike soro ngwugwu ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ ndị ahịa anyị.